I-Lady Africa Bush Lodge - I-Safari Tent - I-Airbnb
I-Lady Africa Bush Lodge - I-Safari Tent
Mokopane, Limpopo Province, iNingizimu Afrika
Ikamelo e-itende ibungazwe ngu-Lizelle
Itende ngalinye linendawo yalo yokubhukuda yangasese, indlu yangasese, ubhavu wangaphandle, ishawa yangaphakathi, ikhishi langasese elinakho konke, indawo ye-braai nezihlalo zokuphumula. Umbhede olala abantu ababili, igumbi lokugezela elingaphakathi. Wonke amalineni anikeziwe.
Ngokokuzithokozisa okuseduze nemvelo futhi okuyiqiniso, i-Lady Africa Bush Lodge inikeza izivakashi ithuba lokulala kwelinye lamatende amane e-Luxury Safari. Ngaphandle futhi ngokubukwa kwamahlathi amaningi, ukulala ngaphansi kwe-canvas kuyisipiliyoni esivusa amadlingozi.
Ukuphumula ku-veranda yangasese kunikeza umuzwa wokusondelana eduze nemvelo kanye nendawo enhle ezungezile.
Itende ngalinye linendawo yalo yokubhukuda yangasese, indlu yangasese, ubhavu wangaphandle, ishawa yangaphakathi, ikhishi elinakho konke, indawo ye-braai nezihlalo zokuphumula. Wonke amalineni anikeziwe.
Lapho ubhukha uzothola ikhodi yokungena esangweni elikhulu le-lodge kanye nezikhombisi-ndlela eziya etendeni lakho. Lena isevisi yokuzihlola wena.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mokopane namaphethelo